हातमा यो रेखा टुटेको छ भने जिन्दगीभर हुन्छ तनाब, कतै तपाईको हातमा छ की ? – Sanchar Patrika
हातमा यो रेखा टुटेको छ भने जिन्दगीभर हुन्छ तनाब, कतै तपाईको हातमा छ की ?
जीवनमा प्राप्त हुने सुख दुखको पूर्वानुमान लगाउन हस्तरेखा निक्कै प्रभावकारी हुने हस्तरेखाविदहरु बताउँछन्।हाम्रो हत्केलामा अनेक प्रकारका रेखा हुन्छन् । सबै रेखाको आफ्नै आफ्नै अर्थ हुन्छ । उमेर देखि भाग्य सम्मका कुरा हातका रेखाले बताउने ज्योतिषशास्त्रको दावी छ । जीवन रेखा हत्केलामा सामान्यतः तीन रेखा हुन्छन्।जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा र हृदय रेखा । बुढी औंलाको फेँदमा रहेको शुक्र पर्वतलाई घेर्ने रेखालाई जीवन रेखा भनिन्छ । यो रेखा चोरी औंलाको तल रहेको गुरु पर्वतको आसपास हूँदै हत्केलाको अन्त्यमा हुने मणिबन्द तर्फ जान्छ । यदी तपाइँको जीवन रेखा टुटेको छ भने यसले जीवन भरी दुःख दिन सक्छ ।
अशुभ जीवन रेखा हत्केलामा हुने जीवन रेखा जस्तो छ जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ । यदि यो रेखा एकदम छोंटो छ र अन्य रेखाले काटिएको छ भने यसले जीवनमा दुःख मात्र प्राप्त हुने संकेत गर्छ । जीवन रेखा जति लामो भयो त्यति नै शुभ मानिन्छ।यदि मस्तिष्क रेखा (मस्तिष्क रेखा र जीवन रेखा लगभग एकै स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ) ।
र जीवन रेखाकोबीचमा केही अन्तरको भाग छ भने यस्ता ब्यक्ति विचारशील हुन्छन्। र स्वच्छन्द स्वभावका हुन्छन्।त्यस्तै यदि मस्तिष्क रेखा र जीवन रेखाको मध्य भागमा बढी नै अन्तर छ भने यस्ता ब्यक्ति सोंच विचार नगर्ने र लापरवाही ढंगले काम गर्ने हुन्छन्।यदि दुवै हातमा जीवन रेखा टुटेको छ भने यस्ता ब्यक्तिको अल्पायुमा मृत्यु हन सक्छ र कष्टपूर्ण जीवन पनि हुन सक्छ।एउटा हातमा मात्र जीवन रेखा टुटेमा भने यस्ता ब्यक्ति रोगी हुन्छन्। जीवन रेखा टुट्नु आफैमा अशुभ लक्षण हो।
Prevभर्खरै काठमाडौंबाट आयो अर्को ठुलो दुखद ख़बर
Nextमोरंगमा १८ बर्षिय सन्दिपको सुतेकै ठाउमा मृु’त्यु, मृुत्यु भएको भन्दै पीडित परिवार रुँदै मिडियामा (भिडियो )